सिस्नुपानीको झापड, पूर्वराजाको मधुर धम्की र दुइतिहाइको बान्की !
काठमाडौं – केही दिनपछि मनाइने छठसँगै यस वर्षका मुख्य चाडपर्वको बिदाइ गरिँदैछ । हुन त उभौली, ल्होसार जस्ता चाड पनि नेपाली मौलिक पर्व नै हुन् । परन्तु दशैं र तिहारजस्ता चाड नेपालीका साझा भइसकेका छन् ।
भदौं महिना सकिनासाथ नेपालीलाई ‘पर्व ऋतु’ले छुन्छ । जरुरी काम पनि दशैंतिहारपछि गरौंला भन्ने नेपालीको बानी नै भइसकेको हुन्छ । जेहोस् दुःख, पीडा बिर्सेर नेपालीले दशैंतिहार मनाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ वर्ष नेपाल संवत ११४० पनि शुरू भइसकेको छ ।
दशैंतिहारको बीचमा यसपटक केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम विकास भए । देशभर दशैंको अष्टमी मनाइरहेको समयमा बलात्कारको बात लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर पक्राउ परे ।
आजपर्यन्त महरा पक्राउको विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । तिहारको अवसरमा सिस्नुपानी नेपालले गाएको देउसीभैलौमा महराप्रति व्यंग्य मात्र गरिएन, अरु पनि भीआईपी महराहरू रहेको भन्दै व्यंग्यको वर्षा भयो –
भीआईपीमा को–को होलान् गुप्त महरा
विगत वर्षजस्तै आम जनतामा देखिएको निराशालाई सिस्नुपानीले उजागर गर्‍यो, राजनीतिक दलका नेता र देश चलाउने सबैलाई राखेर ।
सरकारको कामकारवाही, ढिलासुस्ती र बेथितिप्रति व्यंग्य गर्दा सरकारका मन्त्री र उच्च ओहोदाका व्यक्ति लाचार ढंगले ङिच्च हाँसे । यसपटक मात्र होइन, विगत वर्षमा पनि सिस्नुपानीले सरकारको कार्यशैली र नेतालाई यस्तै व्यंग्य गरेका थिए ।
परिवर्तन पक्षधरलाई पूर्वराजाको धम्की !
उमेरले ७२ काटिसकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बेलाबखत विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउने गर्छन् । मंगलवार बहिनी शोभा शाहीबाट भाइटीका ग्रहण गरिसकेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले परिवर्तनकारीलाई अप्ठ्यारो पर्ने संकेत गरे ।
राजतन्त्रका पक्षधर एउटा तप्का पूर्वराजाको सक्रियतालाई बडो उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको हुन्छ । उनीहरूलाई सान्त्वना दिनपनि पूर्वराजाले बेलाबखत देशको चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्छन् ।
गर्न त सक्ने केही होइनन्, आफ्नै परिवार सम्हाल्न धौंधौं परिरहेको छ पूर्वराजालाई । छोरो पारस आवारा शैलीमा थाइल्याण्डकी एक विवादास्पद केटीलाई घुमाएर पितापूर्खाको बद्नाम गर्दै हिँडिरहेका छन् । ज्ञानेन्द्रले भने सकी–नसकी इज्जत थेगिरहेका छन् ।
टीकाको दिनमा कसैको खुट्टा नतान्ने र कुरा नकाट्ने भन्दै उनले धमुर भाषामा नेताहरूलाई धम्की दिँदै भने, ‘जुनसुकै परिवर्तन हुँदाखेरी दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनुपर्छ । एउटा प्रगति र अर्को विकास । यी दुईटा कुरालाई मनन् गरेन र बुझेन भने परिवर्तनको माने हुँदैन, परिवर्तनकर्ताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’
उनले धन हुनेलाई मन पाइयोस् र मन हुनेलाई नेपालीपन पाइयोस् भनेर प्राथना गरेको स्मरण गरे । नेपालीपनको कुरा गरेर जनभावना जित्ने कोसिस गरे उनले । परिवर्तनकारीको चिन्ता गरेपनि ज्ञानेन्द्रको बोली समकालीन राजनीतिक दललाई चेतावनी पनि हो ।
आफ्नो कमजोरी लुकाउन दलका नेताहरू पूर्वराजालाई गाली गरेर आफूहरूलाई अब्बल देखाउन खोज्छन् । राजतन्त्रको भूतबारे सिस्नुपानी नेपालको देउसी गीत पनि सान्दर्भिक छ –
ढल्किन लागेको दुइतिहाइको जवानी !
आउँदो मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको २ वर्ष पूरा हुँदैछ । सरकार गठन भएको २० महिना पूरा भएको छ तर आम जनताको भोगाइमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकार र अहिलेको दुईतिहाइको सरकारको केही भिन्नता छैन ।
सुशासनको भाषण गर्ने मन्त्रीको कर्मकाण्ड त लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा पनि चल्दै आएको थियो । साल बदलिएको छ, सिंहदरवारको हाल उस्तै छ । मन्त्रीहरूको काम झण्डा हल्लाउँदै सवारी जाम गराउनेबाहेक केही भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साघुरो घेराबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । अवस्था उस्तै छ भनेर मिडियाले लेख्दा उल्टै प्रश्न गर्छन्, ‘विकास नदेख्ने ? शी चिनफिङको स्वागतका लागि काठमाडौंमा गरिएको नक्कली विकासलाई नै मानक मान्ने हो भने त चमत्कार भइरहेको छ तर प्रधानमन्त्री हिँड्ने बाटोभन्दा पर हाल उस्तै छ । केन्द्र्रीय सरकारको राजधानी र राजधानी रहेको प्रदेशको राजधानी हेटौडा जोड्ने सडकको दूरावस्था हेर्‍यो भने विकास देखिन्छ । दशैंको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंदेखि गल्छीसम्मको सडक हेर्‍यो भने विकास देखिन्छ । कोटेश्वरदेखि ठिमीसम्मको जाम हेर्‍यो भने विकास देखिन्छ । चक्रपथमा हिँड्ने बटुवाले मुख छोपेर हिडेको हेर्‍यो भने विकास देखिन्छ ।
असोज २९ गते नेकपाले आयोजना गरेको चिपायान कार्यक्रममा प्रधामनन्त्री ओलीले चुनौती दिए, ‘विकास नदेख्ने ?’ कात्तिक १० गते प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सिस्नुपानीले व्यंग्य गर्‍यो ।
धूवाँ र धूलोको – नाम छैन
खोइ कहाँ हिलो – देखिन्छ
जाँ गयो त्यहीँ – भीड लाग्छ
मञ्चमा जाँदा – थपडी छ
शी चिनफिङलाई – ल्याकै हो
तर ओलीले सिस्नुपानी पनि बजार हल्लाबाट प्रभावित भएको भनेर वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न खोजे । सानातिना कुराको जानकारी राख्ने प्रधानमन्त्री किन वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न खोज्छन् ? कागजी तथ्यांकले विकास भएको हुँदो हो त डा. रामशरण महतको पालामै नेपालमा गरीबीको अन्त्य र समृद्धिले आकाश छोएको हुन्थ्यो । अवस्था उस्तै छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले सच्चाइलाई पत्याएनन् । बरु सिस्नुपानी नै बजार हल्लाले प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिए । सिस्नुपानीले आफ्नै अगाडि कलात्मक शैलीमा गरेको आलोचना र वास्तविकता स्वीकार नगरेपछि अरुले गरेको विरोध त प्रधानमन्त्रीले कसरी सुन्लान् र ? कागजी मिथ्यांकलाई केलाएर आमूल परिवर्तन भयो भन्ठान्नु ठूलो ठट्टा हुनेछ ।
गैंडाको छाला जस्तो नेताहरूको बानी !
आलोचना सुन्दा–सुन्दा नेताहरूको स्वभाव गैंडाको छाला जस्तो भएको छ । के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष ? सबै दलका नेताको कार्यशैली, व्यापारी ठेकेदारसँगको हिमचिमले आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आचरण सुधार्दैनन्, बरु दोहोर्‍याउँछन् ।
गाईजात्रा होस् वा देउसीको व्यंग्य नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रहारको तारो बन्छन् । सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डका बोली र व्यवहार पनि व्यंग्यकारका लागि रुचिका विषय बन्ने गरेका छन् । २०७५ सालको देउसीमा पनि प्रचण्डका घरबेटी ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी यसरी जोडिएका थिए –
ठेकेदारलाई कारबाही गर्न हाम्रो सरकार मच्चियो
घरबेटीले थर्काएछन् आफैं थच्चियो
यसपटक पनि घरबेटी ठेकेदार छुटेनन । बरु परिवारका हरेक सदस्यलाई राजनीतिक अंशबण्डा दिएको भनेर प्रचण्डले व्यंग्य बाण खानुपर्‍यो । कार्यक्रमको अघिल्लो कुर्सीमा आसिन प्रचण्डलाई यसपटक सिस्नुपानीले गरेको प्रहार यस्तो थियो –
कस्को घरमा डेरा बस्छौ, भात खान काँ जान्छौ
ब्ल्याक लिस्टेडलाई मेलम्चीको ठेक्का मालामाल !